နိုင်ငံတကာရဲ့ စံညွှန်းမှီလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ မဖြစ်မနေအသုံးပြုနေတဲ့ PDCA စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းတချို့ကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ ပြန်လည်အသုံးပြုစေရန် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ခေတ်ပြိုင်ဈေးကွက်မှာ မတူညီစွာအောင်မြင်နိုင်စေတာ အားလုံးရဲ့ Management ပုံစံနဲ့သက်ဆိုင်မယ်ဆိုလျှင် ယခု PDCA စီမံခန့်ခွဲမှုဟာ သင့်အတွက်မဟာဗျူဟာကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။ စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတွေထဲမှာမှ PDCA ဟာ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ နေ့စဉ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုသင့်တဲ့ နည်းလမ်းလို့လဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ * P – Plan (အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း)…………………………… ----- လုပ်ငန်းတစ်ခုမစခင်မှာ အရေးကြီးဆုံးအရင်လုပ်သင့်တာကတော့ Plan (အစီအစဉ်) ဖြစ်ပြီး၊ အစီအစဉ်ဆွဲတာ ကောင်းခဲ့ရင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု၊ ပြီးစီးမှုတွေမှာ ထိရောက်တဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေဖြစ်လာမှာပါ၊ ဥပမာ - Telenor, Oreedoo, Coca Cola စတဲ့ Brand တွေမှာ ဘယ်အချိန်မှာ၊ ဘယ်မြို့ကို၊ ဘယ်လောက် Target ရအောင်လုပ်မဲ့ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေက အားသာချက်ရှိလို့ ဈေးကွက်မှာပိုမိုအောင်မြင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစီအစဉ်ဟာ လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းရဲ့ အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပြီး Fail to Plan…Plan to Fail ဆိုပြီး သုံးနှုန်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းကြီး၊ လုပ်ငန်းသေး၊ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို Plan စီစဉ်ရေးဆွဲမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ * D – Do (လုပ်ဆောင်ခြင်း)……………………………. ----- ရေးဆွဲပြီးတဲ့ အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုတော့ Do (လုပ်ဆောင်ခြင်း) နဲ့ လုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုအပ်မှာပါ၊ တချို့ကအစီအစဉ်တွေကောင်းခဲ့ပြီး Do အဆင့်မှာအားနည်းတဲ့အခါ ထင်သလောက်မပေါက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းရှိတက်လို့၊ အစီအစဉ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျရှုံးခြင်းဆိုတာက Plan ရဲ့ အပေါ်မူတည်နေသလို လက်တွေ့ Do လုပ်ကြည့်လိုက်မှလည်း အဖြေမှန်ဆိုတာအတိအကျပြောနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သိမြင်ခြင်းဆိုရာမှာ ၄၀ % ကိုပဲဖြစ်စေနိုင်ပြီး လက်တွေ့ Do လုပ်ခြင်းက ၈၀% အထိရရှိနိုင်တယ်လို့ စာဆိုတွေအဆိုရှိခဲ့တာမို့ အစီအစဉ်တွေကို Do ပုံစံနဲ့ ဦးတည်ချက်ရောက်စေအောင်ဖန်တီးပြောင်းလဲရယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရာတိုင်းဟာ Dream ကြောင့် အောင်မြင်တာမဟုတ်ပဲ အဲ့ဒီ Dream ကို DO လက်တွေ့ကြိုးစားခြင်းသာအောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့ တူညီတဲ့အရည်အချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ * C – Check (စစ်ဆေးခြင်း)……………………………. ----- အစီအစဉ်တိုင်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပြီးချိန်မှာတော့ Check (စစ်ဆေးခြင်း) ဆိုတဲ့ ကြီးကြပ်ခြင်းတွေကို လုပ်နိုင်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်၊ Level မတူခြင်း၊ အမြင်မတူခြင်း-နားလည်မှုလွဲခြင်း-အားစိုက်ထုတ်မှုကွဲပြားခြင်း-စီမံမှုပုံစံကွာခြားခြင်း စတဲ့ အဟန့်အတားတွေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတက်လို့ အလုပ်ပြီးစီးဖို့ဆိုတဲ့တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ မတူညီစွာ ပုံစံဖော်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းမှာ လုပ်နေစဉ် (သို့) မပြီးမြောက်ခင်တွေမှာ ပြန်လည်စီစစ်နိုင်မှ အချိန်ကိုက် Target ပြည့်မှီအောင်၊ Objective အတိုင်း ပြီးစီးနိုင်မှာဖြစ်ဖို့ အမှားအယွင်းရှိခဲ့ရင်တောင်မှ အချိန်မှီရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလုပ်ငန်နေတဲ့ အလုပ်တိုင်းကို ပြန်လည် Check and Balance လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုနည်းပြီး ထိရောက်မှုအားကောင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ * A – Act (ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း)……………………………… ----- ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပြီးချိန်မှာ အစီအစဉ်တကျမရှိ/ မဖြစ်တော့ရင်တော့ Act (ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်) ဆိုတဲ့ မှားနေလျှင်ပြင် - မှန်လျှင်ရှေ့ဆက်ပုံစံနဲ့ ဘယ်လိုပြီးစီးအောင်ရှေ့ဆက်မလဲ၊ စစ်ဆေးမှုရဲ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို အချိန်မှီရည်ရွယ်ချက်သို့ ပြီးမြောက်စေရန်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပြီး၊ တဖန်ပြန်လည် Plan ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်အသစ်တွေကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲသွားရင်းဖြင့် လုပ်ငန်းတိုင်းကို ပိုမိုထိရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင် PDCA ဟာ ရပ်တန့်မနေတဲ့ လည်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးလို စီမံခန့်ခွဲမှုတွေရဲ့ လည်ပတ်နေမှုကို Plan (စီစဉ်ရေးဆွဲ) – Do (လက်တွေ့ပြုလုပ်) – Check (ပြန်လည်စစ်ဆေး) – Act (ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်) စတဲ့ PDCA အတိုင်း ဆန်းသစ်တိုးတက်မှု၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မှု စတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေဟာအမြဲတည်းပြောင်းလဲနေတက်လို့ Plan – Do – Check – Act ဆိုတဲ့ (လည်ပတ်ပုံစံ) နဲ့ မိတ်ဆွေများရဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ အနာဂတ်ရဲ့အစီအစဉ်အသစ်တွေကို အကျိုးရှိရှိဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ အကြံပြုရေးသားရင်းနိဂုံးချုပ်ပါရစေ။